कहिल्यै नसकिने आइ/एनजिओका मिटिङ | Jwala Sandesh
| प्रकाशित मितिः बुधबार, मंसिर ३, २०७७ ::: 16 पटक पढिएको |
यति धेरै आइ/एनजिओले खर्बौं खर्ब रुपैयाँ के-के काममा खर्च गर्छन् भनेर यो लेखमा छैन। यहाँ त यस्ता विकासे संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि केही ‘टिप्स’ दिन खोजिएको छ।
अझ ‘टिप्स’ पनि मिटिङमा बस्दाको लागि मात्र। कोरोना फैलिएदेखि यस्ता विकासे संस्थामा काम गर्नेहरू दिनभर ल्यापटपमा ‘मिटिङ’ भन्दै बस्छन्। कोरोना फैलिनु अगाडि यिनीहरू होटल, सेमिनार वा एकअर्का विकासे संस्थाको कार्यालयमा यसरी नै मिटिङ बस्थे। मिटिङमा विकासे कार्यकर्ता कसरी प्रस्तुत हुनु पर्छ भन्नेमा यो लेख केन्द्रित छ।
यस लेखका लेखकमध्ये एक जना देश-विदेशमा आइ/एनजिओमा बीस वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेका अनुभवी हुन्। त्यसबाहेक यिनीहरूले विकासे संस्थाको मिटिङमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर केही खोजबिन ‘गुगल’मा पनि गरेका छन्।
पहिलो ‘स्ट्राटेजिक’ भनेको रणनीतिक।
स्कुल बच्चाहरूलाई लिटो बाँड्नेबारे विकासे मिटिङ होस् कि वातवारण जोगाउन नयाँ कम्पनी खोल्न नदिने मिटिङ होस् वा कोरोना भाइरसबारे जनचेतना जगाउने विकासे मिटिङ होस्। तपाईंले ‘यो स्ट्राटेजिकल्ली जानु पर्छ’ भन्न छाड्न हुँदैन।
दोस्रो ‘माइलस्टोन’ भनेको उपलब्धि।
यो योजनाका माइलस्टोनहरू के-के हुन् त भनेर मिटिङमा प्रश्न गरिहाल्नु पर्छ। धेरै जसो प्रोजेक्टले केही नापिन्न भनेर त तपाईंलाई थाहा छ। तै पनि ‘यो प्रोजेक्टको माइलस्टोनमा थप क्लियर हुन आवश्यक छ’ भनेर मिटिङमा भन्दिनुहोस्।
पाँच वर्ष (जति वर्षे प्रोजेक्ट हो त्यति नै भन्ने) का मुख्य माइलस्टोन के-के हुन् त? कुन-कुन वर्षमा के-के उपलब्धि हुन्छ? त्यस्तै ‘गोल, अब्जेक्टिभ र भिजन क्लियर छ कि छैन प्रष्ट हुनुपर्छ’ भन्नुहोस्। यी सबै भनेको त्यो प्रोजेक्टको उपलब्धि के हो त भन्न खोजेको नै हो। तर त्यही कुरालाई अलि धेरै शब्दबाट भनिदिएमा थप बुझकारी व्यक्ति रहेछ भनेर अरुले देख्छन् नि।
त्यस्तै ‘एक्सन प्लान’ के-के हुन् त भनेर सोध्नुस्।
अझै जान्ने टोपलिन छ भने एक्सन प्लानमा अरु के-के थप्न सकिन्छ भनेर आफ्नो कुरा राख्दा राम्रो। जस्तै लिटो खुवाउने प्रोजेक्ट हो भने म यसको एक्सन प्लानमा थप्न चाहन्छु भन्दै ‘विद्यालयमा शौचालय पनि बनाउन पर्छ’ भन्नुहोस्।
अर्को कुरा ‘नेक्सस प्रोग्रामिङ’ बारे पनि चर्चा गर्नु राम्रो।
यो भनेको प्रोजेक्ट कुनै हिसाबले पनि नसकियोस्। एउटा न अर्को रूपमा प्रोजेक्ट रहिहनुपर्छ भनेको। नेक्सस प्रोग्रामिङमा जोडिएर आउँछ ‘ह्युमेनिटेरियन, लङ टर्म डेपलपमेन्ट’ र ‘पीस बिल्डिङ’।
जति सकिन्छ ‘सस्टेनिबिलिटी’ शब्द प्रयोग गर्नुहोस्। यसको अर्थ प्रोजक्टको दिगोपनको कुरा हो। जस्तै कुनै प्रोजेक्टले शौचालय बनायो भने त्यसलाई दाताले पैसा दिन छाडे भने पनि कसरी सञ्चालन गरिराख्ने भन्ने कुरा यसमा पर्छ।
मिटिङमा कसैले कुनै योजना वा विचार ल्याउने बित्तिकै यो प्रोजक्टको सस्टेनिबिलिटी मोडल के हो त भन्ने प्रश्न सोध्न तयार भएर बस्नुहोस्। त्यसका साथै स्थानीयकरण ‘लोकलाइजेसन’ गर्नुपर्छ भन्न पनि नबिर्सनुहोला।
‘अन्तको योजनाको ठ्याक्कै नक्कल गर्दा प्रोजेक्ट असफल हुन जान्छ’ भन्नुहोस्। त्यसैले यहाँका मान्छेको ‘क्यापासिटी बिल्ड अप’ गर्ने कुरामा प्रोजक्टले ध्यान दिनु पर्छ भन्नुहोस्।
अंग्रेजीमा ‘इम्पावरमेन्ट’ नेपालीमा सशक्तिकरण, गजबका शब्द हुन्। तर आजभोलि विकासे संसारमा धेरै प्रयोग भएर क्लिशे भएका छन्। प्रयोग गर्न परे एउटा मिटिङमा एक दुई पटक मात्र प्रयोग गर्नुहोला।
‘त्यहाँका नागरिकले प्रोजेक्टको ओनरसिप लिनु पर्छ’ भन्नुहोस्। यो भनेको प्रोजेक्ट गर्दा स्थानीयले अवरोध नगरून्, हाम्रै हितमा आएको प्रोजेक्ट हो भनेर बुझून् भनेको हो।
अझ युएनको ‘सस्टेनिबेलिटी डेभलपमेन्ट गोल्स’सँग यो प्रोजेक्टको तादम्यता कहाँ छ भनेर सोध्नु झन् राम्रो। त्यो भनेको राष्ट्रसंघले सबै देश र त्यहाँका बासिन्दाको समृद्धिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता कुरामा सबैको समान अधिकार र पहुँच हुनुपर्छ भनेको हो।
‘डाइभर्सिटी’ भनेको विविधता र ‘इन्क्लुजन’ भनेको समावेशी। यी दुई शब्द पनि मिटिङमा प्रयोग गर्नुहोस्। यो प्रोजेक्टले को-कोलाई फाइदा पुग्छ त? के विविध थरिका समुदायलाई फाइदा पुग्छ? भन्नुहोस्।
खोटाङमै कार्यक्रम छ भने पनि ‘मधेशीलाई यसले फाइदा पुग्छ त?’ भनेर सोध्नुस्। अनि कसैले ‘खोटाङमा मधेशी त छैनन्’ भनेर जवाफ फर्काए ‘मैले रोल मोडलिङको कुरा गर्दैछु, भोलि गएर यो प्रोजेक्ट सिराहामा गर्नुपर्ला, त्यसबारे पनि अहिल्यैदेखि सोच्दैछु’ भन्नुहोस्।
प्रोजेक्ट साधु-नाङ्गा बाबाको उत्थानका बारेमा भए पनि यसमा ‘जेन्डर कम्पोनेन्ट’ के हो भनेर सोध्न कहिल्यै बिर्सन हुन्न। ‘महिलाले यसबाट के फाइदा पाउँछन्?’ भनेर सोध्नुपर्छ।
‘मार्जिनलाइज्ड र ‘एक्स्कुलेटेड ग्रुपका लागि यो प्रोजेक्ट कसरी समावेशी छ भनेर प्रष्ट हुनु चाहन्छु,’ मिटिङमा भन्न छुटाउनु हुँदैन।
अर्को शब्द हो ‘स्टेकहोल्डर’, सरोकारवाला। यसका अरू स्टेकहोल्डरहरू को-को हुन् त भनेर मिटिङमा सोधिहाल्नुहोस्। अझै लोकल गभर्मेन्टलाई प्रमुख स्टेकहोल्डर बनाउनु पर्छ भन्न नबिर्सनुहोला। हामीले सरकारलाई अकाउन्टेबल (उत्तरदायी) बनाउन नसके यो प्रोजेक्ट सस्टनेबल हुँदैन पनि भन्दिनोस्।
अकाउन्टेबिलिटी कोप्रति हो? ‘डोनर प्रति कि सरकार प्रति कि, प्रोजेक्टबाट लाभ लिने बेनिफिसियरी प्रति?’ भनेर सोध्न सके राम्रो हुन्छ।
‘म त डाउनवार्ड अकाउन्टेबिलिटीमा विश्वास गर्छु। बेनिफिसियरी प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। ठूला रिपोर्ट बनाएर डोनरलाई देखाएर मात्र काम हुँदैन। खास लक्षित समूह टार्गेट ग्रुपले के फाइदा पाए, तिनको जीवनमा के परिवर्तन आयो त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो’ भन्दिनोस्। सबैजनाले तपाईंको प्रशंसा गर्छन्।
हिजोआज क्लाइमेट चेन्ज (जलवायु परिवर्तन) र इन्भाइरोंमेन्ट प्रोटेक्सन (वातावरण संरक्षण) बारे पनि कुरा गरे राम्रो। ‘बेनिफिसियरी’ त्यो प्रोजेक्टबाट फाइदा पाउने समूह हो। तर त्यो प्रोजेक्टले जलवायुमा कस्तो असर पार्छ भनेर सोध्नु पर्छ। जस्तै सिन्धुलीमा सात वटा बाख्रा बाँड्ने प्रोजेक्ट भए पनि ‘त्यसले वातावरण संरक्षणमा के योगदान दिन्छ वा जलवायु परिवर्तनमा केही नकारात्मक असर पार्छ कि, त्यसबारे प्रष्ट हुन चाहन्छु’ भनेर सोध्नुहोस्।
‘म त हामी सबैले बोटल्ड वाटर युज नगरौं भन्छु’ भन्दा राम्रो। नजाने पनि कार्बन फुट प्रिन्ट घटाउन आफ्नो तर्फबाट पनि योगदान दिनुपर्छ भन्दिए मिटिङमा सबैले तपाईंको सरहाना गर्छन्।
अब चाहिँ ‘मिल’ भन्ने शब्द सम्झनोस्, एमइएएल।
कसैले प्रोजेक्टको कुरा गरोस् कि रिसर्चको, तुरुन्तै सोधिहाल्नुस् ‘यसको मनिटरिङ र इभ्यालुएसन प्रोसेस के हो?’ विगतमा यस्तै प्रोजेक्टबाट के सिकियो भन्ने प्रश्न पनि बेलाबेलामा उठाउनुपर्छ। कसले कसरी प्रोजेक्टबारे अनुमगन र मूल्यांकन गरिरहन्छ त्यो बारे प्रष्ट हौं भन्न मिटिङमा कहिल्यै छुटाउन हुन्न।
‘मिल’ सम्म पुग्न अप्ठ्यारो भयो भने ‘एम एन्ड ई’ मात्र ले पनि चल्छ। मनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन।
अझ ‘लास्ट मन्थ वा विक म सिराहा पुगेर आएकी, त्यहाँकी बुढी महिलाले हामीले दिएका एउटा साबुन, एउटा स्यानिटाइजर र दुइटा मास्ककै कारण आफू कोरोनाबाट बचेको बताइन्। मेरो त आँखै रसायो’ भन्दिनोस्। तपाईंलाई सबैले वाउवाउ, एक्सिलेन्ट भन्नेछन्।
हामीले द गार्डियनु मा प्रकाशित यो लेख पढेपछि मात्र यति लेख्न सकेका हौं।
(लेखक उमानाथ संजेल आयरलान्डको गैरसरकारी संस्था ट्रोकेयर आयरलान्ड, म्यानमारमा र दीपक भट्टराई बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था बीबीसी मिडिया एक्सनमा कार्यरत पत्रकार हुन्।) सेतोपाटीबाट साभार गरिएको ।